सभामुखद्वारा संसदमा एमालेका यी ४ सांसद निस्काशित भएको घोषणा ! - Juneli Daily
सभामुखद्वारा संसदमा एमालेका यी ४ सांसद निस्काशित भएको घोषणा !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका चार जनाको सांसद पद आज गुम्ने भएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरू सांसद नभएको सूचना आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठक अहिले दिउँसो १ बजे बस्दै छ।
संसद बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउन पठाएको पत्रमा छलफल भएको थियो। सोही बैठकमा उनीहरूलाई सांसदबाट हटाएको सूचना आज जारी गर्ने तय भएको हो।
यसअघि गत मंगलबार माओवादी केन्द्रले ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलाई सांसद पदबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।
२०७४ सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका उनीहरू तत्कालीन नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओली समूहमा लागेका थिए।
एमालेका मन्त्रीद्वारा सामुहिक राजिनामा, सरकार अल्पमतमा
कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेको नेकपा एमालेका तीनै‌ मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिनु भएको छ । पार्टीको निर्देशनअनुसार माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा रहनु भएका तीनै जना मन्त्रीले आज राजीनामा दिनु भएको हो ।
मन्त्रीहरुमा दल रावल, प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएपछि महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री रावलले आज सामुहिक राजीनामा दिएको बताउनु भयो ।
यसअघि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर तीन मन्त्रीहरु सरकारबाट नबाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सरकार बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहनु भएको थियो ।
चार मन्त्रीको पद खुस्काउने तयारी अन्तिम चरणमा
नेकपा एमालेको पक्षमा लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुमाथि माओवादीले कारवाही गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । माओवादी आफ्नो दलको तर्फबाट मन्त्री बनेर एमालेतिर लागेका चार जनाको पद खुस्काउन आज या भोलिभित्रै संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्ने अनि्तम तयारीमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा बसेर दल बदल गरेका छ जना मन्त्रीमध्ये चार जनाको सांसद पद नरहने गरी आज संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोत भन्छ ‘आइतबार नै दर्ता गर्ने भनिएको थियो । आज दर्ता गरेपछि सम्भवतः सभामुखले एक सातापछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । त्यसपछि चार जना मन्त्रीको सांसद पद सकिनेछ । ’
शुरुमा पत्र दर्ता गर्ने र छ दिनपछि कार्यान्वयनमा लाने भन्ने सहमति थियो तर प्रमुख सचेतक देव गुरुङले छ दिनपछि पत्र दर्ता गर्ने भनेर बुझिदिनाले समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
दल बदल गरेका कारण सांसद पद चट् हुनेहरूमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट,ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह छन् । खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ सांसद नै नभएकाले उनीहरुले सुरक्षित अनुभव गरेका छन् ।